Rasmi: Salman Khan iyo Alia Bhatt oo ka hadleyn sameynta filimka weyn Inshallah – Filimside.net
Rasmi: Salman Khan iyo Alia Bhatt oo ka hadleyn sameynta filimka weyn Inshallah
Waxaan idinla wadaagnay waxyar ka hor hadal heynta Bollywood-ka ugu weyn maanta inay tahay filimka weyn Inshallah in lagu dhawaaqay sidoo kalena hogaamiyaal ka yihiin Mega Star Salman Khan iyo xidigta Bollywood-ka xiligaan ugu awooda badan Alia Bhatt halka Sanjay Leela Bhansali uu Director ka yahay mashruucaan.
Haddaba Salman Khan ayaa si rasmi ah bartiisa Twitter-ka kaga hadlay sameynta filimka Inshallah wuxuuna yiri “Waxaa kasoo wareegatay 20-sano inaay Director Sanjay Bhansali la shaqeeyo waana ku faraxsanahay aniga iyo Sanjay inaan ugu dambeyntii dib isugu soo laabanay si aan filimkiisa xiga u sameeyo. Waxaan u hanqal taagayaa la shaqeynta Alia Bhatt iyo sameynta filimka Inshallah. Waana ku faraxsanahay kuna duceesanahay safarka filimkan inaan amba qaadno.”
Sidoo kale Alia Bhat oo si rasmi ah barteeda Twitter-ka kaga hadashay sameynta filimka Inshallah waxay tiri “Waxaa la dhahaa riyoo adigoo indhahaaga furan yihiin anigana sidaas ayaan sameeyay. Mudane Sanjay iyo Salman Khan waa mucjiso marka ay wada shaqeenayaan, anigana waan sugi weesanahay inaan kula biiro safarkan quruxda badan ee loogu magac daray Inshallah.”
Wax walbo oo kasoo kordho filimka weyn Inshallah ee Salman iyo Alia ku midoobeen sidoo kalena Sanjay Leela Bhansali Director ka yahay kala soco shabakada Filimside…
Waxaa Aqrisay 382